Arrimaha Bulshada 26 11 2015
Sheekh Axmed Madoobe oo rajo xumo ka muujiyay shirkii ka dhacay dalka Biljamka.
on September 19 2013 Gudoomiyaha maamulka KMG ee Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Sheekh Axmed Madoobe) ayaa rajo xumo ka muujiyay in dowladda Soomaaliya ay si sax ah gacanteeda ugu soo dhacdo dhaqaalaha dhawaan loogu deeqay shirka Brussels ee dalka Biljamka.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa sheegay in beesha caalamka ay wax badan hore u sameeysay balan qaadyo badan oo ku aadan in lacago ay ugu yaboohayaan Soomaaliya balse aan balanqaadyadaasi sidii ay u sheegeen u fulin.
Wuxuu sheegay in dadka Soomaalida oo shirar loogu qabto dibadda aysan wax dan ah ugu jirin balse taasi badalkeeda uu ka jecel yahay kuwa lagu qabto gudaha dalka, markaasina uu caalamka wax u qabanaayo.
"Shirar lagu qabto dibadda, wax dan ah uma lahan Soomaaliya, waxaa ila wanaagsan oo ila haboon in shirarkaas lagu qabto gudaha dalka, markaas ayay beesha caalamka deeqaha ay ugu talagashay soo gaarsiin kartaa" Sidaas waxaa yiri Sheekh Axmed Madoobe. Sheekh Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka qeyb gashay shirka ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka, waxaana shirkaasi uu ahaa shir balanqaad lacageed loogu sameeyay Soomaaliya, si dib u dhis iyo hormar laga sameeyo dhinaca amaanka oo haatan faraha kasii baxaaya.